गोपी कृष्णमा ‘छक्का पञ्जा -३’ हेर्नेको घुइँचो (भिडियो सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गोपी कृष्णमा ‘छक्का पञ्जा -३’ हेर्नेको घुइँचो (भिडियो सहित)
काठमाडौं । बुधबार घटस्थापनाको दिनबाट देशैभर प्रदर्शनमा आएको ‘छक्का पञ्जा ३’ हेर्नेको भीड लागेको छ। बिहानको शोमा गोपीकृष्ण हलमा चलचित्र हेर्न आउने दर्शकहरुले चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’का दुइ वटै सिरीज भन्दा यो सिरीज उत्कृट भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
गोपी कृष्णका ५ वटा हलमा छक्का पञ्जा मात्रै चलिरहेको छ । जातीय विभेद, विद्यालयमा हुने राजनीति, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी जस्तो संवेदनशील विषयमा बनेको चलचित्रले वाहवाही पाइरहेको छ। ‘पहिलो नम्बरमा’ र ‘पछि उमेर ढल्किन्छ’ बोलको गीतले चलचित्रको हाइट अँझ उचो बनाएको छ । कमेडी भर्सेज कन्टेन्ट ट्रेलरले चलचित्रप्रति दर्शकमा कौतुहलता बढाएको छ ।
दीपाश्री निरौला निर्देशित फिल्ममा देशका प्रसिद्ध कलाकारको अभिनय छ । दीपकराजले फिल्मको कथा लेखेका हुन्। चलचित्रको कथा दरिलो भएकाले अब आलोचना गर्नेको मुख बन्द हुने दिपकराजको भनाइ छ। चलचित्रप्रति दर्शकको उत्साहपूर्ण क्रेजलाई मध्यनजर गर्दै मल्टिप्लेक्समा सोमबार साँझबाटै बुकिङ खुलाइएको थियो।
दशैँको छेको पारेर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ मा दिपकराज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्धि तामाङ, दीपिका प्रसाई, लक्ष्मी गिरी, शिवहरि पौडेल, विल्सन विक्रम राई, निर शाह, यमन श्रेष्ठ, किरण केसी, शारदा गिरीलगायतका कलाकारहरु मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन्। चलचित्रमा प्रियंका कार्की, वर्षा राउत, सञ्जोग कोइराला, स्वस्तीमा खड्कालगायतका कलाकारकोसमेत अभिनय रहेको छ।